FastPay Casino - tranokala ofisialy, fisoratana anarana 2021
Fampahalalana fototra momba ny vavahady Fastpay
Fomba fisoratana anarana
Bonus sy famporisihana
Ny vavahadin-tserasera Fastpay Casino dia natsangana vao tsy ela - tamin'ny fahavaratry ny 2018. Tao anatin'ny fotoana fohy dia nahomby ny laza teo amin'ny tranonkala sy tamin'ny mpijery mahazatra mahazatra, izay mitombo hatrany. Ny mpikarakara dia mifantoka amin'ny fanomezana lalao madio sy mangarahara, izay manintona ny mpiloka ary mamela azy ireo hanana fahafinaretana marina amin'ny orinasa an-tserasera.
Fastpay Casino dia miasa eo ambanin'ny fahazoan-dàlana miaraka amin'ny laharana fisoratana anarana 8048/JAZ2020-013 ary i Dama NV no miasa, miasa eo ambany fahefan'i Curacao. Na eo aza ny fahatanorany, tafiditra ao anatin'ny lisitry ny trano filokana an-tserasera tsara indrindra izy io. Mpanohana ny filaminana sy ny hitsiny ity, ka na ireo mpampiasa tsy za-draharaha aza dia tsy matahotra misafidy ny tranonkalany ofisialy mandritra ny fotoana fialamboly mahafinaritra.
Ny foto-pisainana casino dia mifantoka amin'ny fanomezana mpanjifa fametrahana vola eo noho eo ary fanamarinana kaonty mora. Ny mpampiasa dia mahazo antoka ny fisintonana haingana ny vola azo sy ny fanamarinana azo antoka. Manaraka ny fironana maoderina, ny Fastpay casino dia manana kinova finday, ary koa fitaratra miasa, izay manitatra betsaka ny fahafahan'ny filokana. Anisan'ireo mpiara-miasa amin'ny klioba dia afaka mahita mpamatsy malaza eran-tany ianao izay niasa tamin'ny sehatry ny filokana nandritra ny roapolo taona mahery.
Ny mpitsidika ny tranonkala dia manamarika ny rivo-piainana mahafinaritra an'ny tranonkala ofisialy sy ny toerana mety anaovana ireo sakana lehibe. Ny sora-baventy mamirapiratra dia misolo toerana, mampiseho ny vahiny sy ny mpikambana voasoratra anarana ao amin'ny klioban'ny FastPay Casino ny fampahalalana rehetra ilaina, ary koa ny fanentanana ny fahalianana amin'ny zava-mitranga ao amin'ny rindriny virtoaly.
Ny pejy lehibe dia misy tabilao fisoratana anarana, fidirana ary menio. Ny interface voasokajy lojika dia manamora ny fitetezana na dia ho an'ireo vao manomboka aza. Ireo mpiloka avy amin'ny firenena samihafa dia hahatsapa ho mahazo aina amin'ny pejiny, satria izy io dia namboarina tamin'ny fiteny maro samihafa:
Ny Espaniôla, soedoà, norveziana, finnish, malay, Kazakh, tiorka, frantsay, tseky, japoney ary maro hafa dia tsy dia misy dikany loatra.
Mampiavaka ny fomban'ny tranokala ofisialy Fastray ny loko marevaka, noho izany faly izy. Ny tsy fahampian'ny fampahalalana tsy ilaina sy ny famolavolana mahafinaritra dia ahafahanao mandositra haingana ny olana isan'andro, miditra amin'ny fialamboly miloka isan-karazany.
Na dia eo aza ny zava-misy fa ny fisoratana anarana amin'ny tranokala ofisialin'ny Fastpay Casino dia takiana amin'ireo izay nanapa-kevitra ny ho lasa mpikambana ofisialin'ny klioba ary manomboka milalao vola tena izy, dia nandalo izany tamim-pifaliana ireo mpampiasa. Fisoratana anarana ho an'ny mpampiasa :
manondro fikasana matotra filokana;
mamela ny mpanjifan'ny tranonkala hankafy tombontsoa maro, toy ny bonus, spin maimaim-poana, fampiroboroboana, famerenam-bola;
manondro fa ny mpikambana vaovao ao amin'ny klioba dia manaiky ny fepetra amin'ny vavahady ary nahatratra ny taonan'ny maro an'isa.
Mba hamoronana kaonty filokana ao amin'ny casino dia ampidiro fotsiny ny tranokalan'ilay tranonkala ary kitiho ny bokotra fisoratana anarana. Mila fotoana kely sy midika hoe:
mameno ny mombamomba ny mpampiasa tenimiafina sy adiresy mailaka;
safidy ny vola kaonty;
fanamafisana ny fahazoana ny promo amin'ny endrika fandefasa-mailaka;
mandalina ny lalàna sy ny politikan'ny andrimpanjakana;
fanamafisana ny maha-zava-dehibe ny boaty mailaka.
Ny teboka farany dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fanindriana ny rohy fampahavitrihana, izay ao amin'ny taratasy avy amin'ny fitantanana vavahady. Tonga tompon'ny kaonty manokana ao amin'ny trano filokana FastPay, ny mpiloka dia manantona ny fizarana "Profile data" ary mameno ny sehatra ilaina rehetra mba hananan'ny mpitantana vaovao momba ilay mpilalao.
Ny avonavon'ity tranonkala ity dia fialamboly maro karazana. Ny milina slot no be mpitia indrindra, saingy eto dia hitanao ihany koa:
latabatra misy mpivarotra mivantana.
Ny efitrano filokana Fastpay dia misy slot 2500 mahery. Mpivarotra efa-polo no nanolotra azy ireo, ny tena malaza indrindra dia ny: Evolution, NetEnterflix, Microgaming, Yggdrasil Gaming, Playtech, Endorphina, Play N 'Go, Igrosoft, Nextgen, sns. Ny mampiavaka ny slot rehetra amin'ity andrimpanjakana ity dia ny kalitaony avo lenta ary fahalalahan-tanana.
Lisitry ny efitrano lalao:
slots - fizarana misy milina virtoaly;
vaovao - ny slot rehetra navoakan'ny mpamatsy ary naseho tao amin'ny katalaogin'ilay tranonkala;
mivantana - lalao mihoatra ny 150 miaraka amin'ny croupiers tena izy;
ny roulette dia fialamboly mahazatra an'ny casino rehetra;
mividy ny ho avy - rindrambaiko manana ny fividianana fiasa bonus;
Ny fitaovana malaza indrindra dia ny Book Of Fastpay, Crazy Halloween, Aztec Pyramids, Dolphins Gold, 777 Diamonds, Fruits & Diamonds, Jungle Treasure, Book Of Tribes, sns. Ho an'ireo mpampiasa rehetra izay tsy manana traikefa firy, dia misy fotoana azo atao hilalao maimaimpoana ao amin'ny casino Fastpay . Ny demo dia tsy mitaky fisoratana anarana na vola amin'ny petra-bola.
Vantany vao vita ny fisokafana dia nanome bonus ho an'ny mpanjifany ny tranonkala tamin'ny famitana ny fisoratana anarana, saingy androany dia nesorina tsy ho ao anatin'ny lisitry ny tombontsoa izany. Fa kosa, mpikambana vaovao mahazo fonosana fandraisana. Izy io dia ahafahana mameno ny petra-bola amin'ny teny tsara indrindra.
Amin'ny top-voalohany voalohany, ny haben'ny fanomezana amin'ny casino dia 100% ary hanampy 100 maimaimpoana FS. Mandritra ny tahiry faharoa dia hahazo bonus ny 75% amin'ny vola napetraka ao amin'ny kaonty. Ny vola farafahakeliny farafaharatsiny amin'ny fametrahana petra-bola amin'ny tahiry voalohany dia ny 1000 RUB, 20 EUR, 20 USD, 8800 DOGE, 0,05 ETH, 0,002 BTC, 0,4 LTC, 0,096 BCH. Ny fotoana hampiarahana azy ireo dia 2 andro. Amin'ity tranga ity dia x50 ny filokana.
Ho an'ny mpanjifa mahazatra dia mihatra ny fepetra manokana. Ny programa VIP dia misy ambaratonga 10 ary misy fanomezana mahafinaritra maro isan-karazany, tolotra lehibe ary famerenam-bola.
Ho fanamorana, azonao atao ny mameno ny vola apetraka ary manaisotra tombony amin'ireto vola manaraka ireto: RUB, USD, EUR, NZD, CAD, AUD, PLN, NOK, JPY, ZAR, BTC, BCH, LTC, DOGE, ETH. Fastpay casino dia manaiky ny vola crypto, izay mampitombo be ny manintona azy eo imason'ny mpitsidika, satria tsy haba io.
Ny fifanakalozana ara-bola amin'ny casino Fastpay dia saika ataon'ny rafitra fandoavam-bola malaza rehetra. Ny fomba malaza indrindra amin'ny fametrahana vola dia: Visa, Mastercard, Maestro, Webmoney, Ecopayz, Neteller, Mifinity, Skrill, Manybetter, Transfer haingana, EcoVoucher, Neosurf, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Tether.
Ny rosia dia tanterahina eo noho eo ary tsy mila komisiona, afa-tsy Webmoney. Ny habetsaky ny famenoana ny petra-bola dia miovaova amin'ny 10 hatramin'ny 4000 EUR/USD. Amin'ny cryptocurrency, ny fandoavam-bola farany ambany dia 0,0001 BTC, 0,01 ETH, 0,01 LTC, 1 DOGE, 0,001 BCH.
Azonao atao ny misintona tombony amin'ny fampiasana Webmoney, Ecopayz, Neteller, Skrill, Manybetter, famindrana haingana, Mifinity, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Tether. Ny fomba dia tanterahina tsy misy komisiona ary maharitra roa ora. Mba hanamarinana ny mombamomba azy, ny mpampiasa dia tsy maintsy mandalo ny fomba fanamarinana.